Uhlu lwezinombolo zocingo lweCayman-Islands | Ukuthengisa Ukuthengisa | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zocingo lweCayman-Islands
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zocingo lweCayman-Islands
Izinombolo Zocingo zeCayman-Islands
Uhlu lwezinombolo zocingo lweCayman-Islands luzokunikeza indlela engcono yokumaketha ukuthengisa okumaketha umkhiqizo wakho nezinsizakalo. Ithimba Ledatha Lamakheli lakamuva linikeza ukuguqulwa kwamanani entengo yokuthengisa okuphezulu. Sinikeza futhi, uhlu lwabathengi lwezinombolo ezisezingeni eliphezulu nezinhle ezisezingeni eliphezulu lapha.
Imininingwane yohlu lwezinombolo zocingo e-Cayman-Islands Ifaka i-Area Code, i-Prefix, i-Carriers ne-SMS TXT yemiyalezo ye-Marketing Marketing. Thenga uhlu lwethu lwezinombolo zocingo engxenyeni yezindleko manje. Noma ngabe, ufuna ukuthola idatha, thenga uhlu, konke okudingeka ukwenze ukuxhumana nathi namuhla.
Thenga uhlu lwabasebenzisi beCayman-Islands
Uhlu lwefoni labathengi beCayman-Island
I-Database yakamuva Yokuposa noma i-Latestdatabase.com ingumthombo wohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi beCayman-Island. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile kanye nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi, uhlu lweselula, igama, ikheli, izwe nekhodi ye-zip. Ngakho-ke, ukwenza i-telemarketing yakho, ukumaketha kwe-sms kanye nokushaya okubandayo.
Uhlu lwezinombolo zocingo lweCayman-Islandconsumer luqukethe uhlu lwezincingo zabathengi eziqinisekisiwe ezi-2,000 ezifika ku- $ 200, isoftware etholakalayo esheshayo engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV lokukhokha ngesikhathi esithile ongalikhokha ngekhadi eliphakeme, i-paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo. Ngakho-ke, ukuthola eminye imininingwane nezinye izinsizakalo ungavakashela isayithi le-Feddabase.com ukuthola imininingwane yakho.
Ukuthenga inombolo yefoni yomthengi waseCayman-Island kuyindlela esebenzayo kunazo zonke ebhizinisini lakho. Imininingwane eqinisekisiwe kunazo zonke ongasiqinisekisa ukumaketha okusebenzayo nendlela elula yokuncenga ikhasimende lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho ngokuchofoza nje.
I-Database Yeposi Lamakheli lakamuva noma i-Latestdatabase.com inikeza uhlu olugcwele lwezinombolo zocingo lwabathengi beCayman-Island ezinamakhono wokuhlunga angenamkhawulo, izisebenzi ezinolwazi kakhulu ukukunikeza umphumela ophelele. Izindleko eyodwa kuzo zonke izinhlobo zokuhola ezihlosiwe hhayi nje kuphela enkulu abahlinzeki bohlu nokwazi izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi ukukwenza waneliseke.
Cayman-Islands Ucingo Umbuzo & Impendulo